Trano fonenana miorina amin'ny trano, mivelona amin'ny trano fiangonana iray | Finday manokana
Home » Trano trano fivarotana, miangona ao amin'ny trano fiangonana iray
Mihamaro hatrany ny olona mitady trano fiangonana.
Raha miaina ao anatin'ny fizarazarana na vondrom-piarahamonina miaraka amin'ny fikambanana iray tompon-trano ianao dia tsy zavatra; Raha mikasa ny hiaina amin'ny toerana tsy misy fomban-drazana ianao, dia mety handinika ny fividianana trano fiangonana izay manome fitaovana ara-javakanto izay matetika sarotra ny mahita sy lafo ny fividianana, ny famindrana ary ny fametrahana.
Ny fitadiavana fiangonana mba hahatonga ny tokantranonao any aoriana dia mety ho sarotra nefa mety ho mora kokoa.
Ny fanadihadiana dia mampiseho fa ny fiangonana maro dia maro no manakatona ny varavarany isan-taona. Tombanana fa eo anelanelan'ny fiangonana 6,000 sy 10,000 isan-taona akaiky an'i Etazonia fotsiny! Izany dia mamela fiangonana maro, izay miala matetika izay mety hovana ho trano fiangonana mahagaga sy tsy mahazatra.
Ao amin'ny bokiny "Nandao an'i Amerika"Matthew Christopher, mpaka sary, dia manisy sary ireo trano fialan-tsasatra nandao ny USA. Ity fiangonana kely misy sary an-kavia ity dia hita ao Bodie, Californie. Mety hanao trano fiangonana tsara izy!
Ny tokantranon'ny fiangonanao dia tsy voatery ho any amin'ny toerana be atao
Matetika ny fiangonana no tsy ampiasaina intsony any amin'ny faritra ambanivohitra. Rehefa niasa izy ireo dia mety nanana fiangonana kely izay nifanerasera tamin'ny fiangonana hafa. Nipetraka tany amin'ny faritra iray aho izay nisy fiangonana telo izay samy mpanompo iray ihany. Ny fiangonana tsirairay dia nanana mpikambana tsy latsaky ny dimy ambinifolo ka ny minisitra dia manana tolotra telo isaky ny alahady. Tamin'ny farany, ny iray tamin'ireo fiangonana dia nivarotra ary ny roa hafa dia nitambatra. Fiangonana iray mipetraka androany. Ny telo amin'ireo rafitra ireo dia fiangonana kely misy firenena kely ary tsy lavitra, fa tsy ao anatin'ny trano fonenana. Ny tany niorenan'ny fiangonana dia sarobidy noho ny teo akaikin'ny faritra. Samy nanao trano fiangonana tsara izy ireo.
Ireo fiangonana dia matetika dia ahitana ny endriky ny planina toy ny varavarankely vita amin'ny tara misy tsangambato tsy mahazatra na gothic varavarankely izay mamela hazavana lehibe ao anaty efitrano iray. Ny mahazatra dia ny mahita hazo be sy rakipeza lehibe izay mety ho efitrano lehibe tokoa! Raha vintana ianao dia afaka mahita fiangonana iray misy plafona hosodoko sy mpanefy mandrehitra! Matetika ny fiangonana dia misy trano fisakafoana ara-barotra. Ireo singa rehetra ireo dia mamorona ny mety hahatonga ny fiovam-po mahatalanjona ny fiangonana.
Nandritra ny taona maro dia nanana fiangonana maro sy tranon'ny fiangonana izahay. Mihamitombo io isa io satria misy trano fiangonana telo tena miavaka sy tena miavaka!